SOFTWARE IJI BELATA EGWU - ỊHỌRỌ USORO IHE OMUME - 2019
Mkpa ịkụda abụ nwere ike ibute n'ọnọdụ dị iche iche. Ikekwe ịchọrọ ịtinye ngwa ngwa na vidiyo, ị ga-achọ ya iji mejupụta vidiyo dum. Eleghị anya ịchọrọ ngwa ngwa nke egwu maka ihe omume ụfọdụ.
N'ọnọdụ ọ bụla, ịkwesịrị iji usoro ahụ iji belata egwu ahụ. Ọ dị mkpa na usoro ihe omume ahụ nwere ike ịgbanwe ọsọ ọsọ na-enweghị agbanwe agbanwe nke abụ ahụ.
Mmemme maka ịkụ egwu egwu nwere ike ịkewa ya na ndị na-ede ụda nke ọma, na-enye gị ohere ime mgbanwe dịgasị iche na abụ na ọbụna idekọta egwu, na ndị na-ezube iji belata abụ. Gụọ ma mụta banyere usoro kachasị mma iji belata egwu.
Ịgba Egwuregwu Slow Downer dị egwu bụ otu n'ime usoro ndị a na-emekarị iji belata egwu. Site n'usoro ihe omume a, ị nwere ike igbanwe obere oge nke egwu n'abughi igwu egwu.
Usoro ihe omume ahụ nwere ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ: ụda ugboro, na-agbanwe ọkwa, na-ewepu olu sitere na ihe egwu egwu, wdg.
Ihe kachasị mkpa nke usoro ihe omume ahụ bụ ihe dị mfe. Otu esi arụ ọrụ n'ime ya ị nwere ike ịghọta ihe ọ bụla ozugbo.
Ihe nkwụsịtụ gụnyere agụnyeghị ngwa nke ngwa ahụ na mkpa ịzụta ikikere iji wepụ ihe mgbochi nke nsụgharị free.
Download Ịtụnanya Slow Downer
Samplitud bụ ụlọ ọrụ ọkachamara maka mmepụta egwú. Ikike ya na-enye gị ohere ịdee egwu, mepụta ụda maka egwu ma gbanwee faịlụ egwu. Na ntinye anya ị ga-enwe mmepụta ihe, ngwá na ụda olu, ihe mkpuchi mmetụta na mixer maka ịgwakọta egwu ahụ pụta.
Otu n'ime ọrụ nke usoro ihe omume ahụ bụ ịgbanwe oge nke egwu ahụ. Ọ naghị emetụta ụda nke abụ ahụ.
Ịghọta interface Samplite maka onye mbido ga-abụ ọrụ siri ike, ebe ọ bụ na e mere atụmatụ maka ndị ọkachamara. Ma ọbụna onye mbido nwere ike ịgbanwe ngbanwe dị mfe ugbu a.
Ihe nkwụsịtụ gụnyere usoro ịkwụ ụgwọ.
Download ngwa ngwa Samplitude
Ọ bụrụ na ịchọrọ usoro iji dezie egwu, gbalịa Audacity. Ikwasi egwu, iwepu mkpọtụ, idebe ụda site na igwe okwu dị na usoro a dị oke aka ma dị mfe.
Site n'enyemaka nke Audacity ị nwekwara ike belata egwu ahụ.
Ihe ndị dị mkpa nke usoro ihe omume ahụ bụ ọdịdị dị mfe na ohere dị ukwuu maka mgbanwe nke egwu. Tụkwasị na nke ahụ, usoro ihe omume ahụ bụ n'efu ma sụgharịa ya na Russian.
FL Studio - nke a bụ ike kachasị nke ọkachamara ọkachamara iji mepụta egwu. Ọbụna novice nwere ike ịrụ ọrụ na ya, ma n'otu oge ahụ ike ya anaghị adị ala karịa ngwa ndị ọzọ yiri ya.
Dịka mmemme ndị ọzọ yiri nke a, FL Studio gụnyere ike ịmepụta akụkụ maka synthesizers, tinye ihe ntanetị, tinye mmetụta, dekọọ ụda ma jikọọ na egwu egwu.
Oge egwu maka FL Studio adịghịkwa nsogbu. O zuru ezu ịgbakwunye faịlụ ọdịyo na usoro ihe omume ahụ ma họrọ oge ọkpụkpọ chọrọ. Enwere ike ịchekwa faịlụ a gbanwere na otu n'ime usoro ndị a ma ama.
Mbelata nke ngwa ahụ bụ ụgwọ omume na enweghi nsụgharị Russian.
Egwú ụda bụ usoro maka ịgbanwe egwu. Ọ dị n'ọtụtụ ụzọ dị ka Audacity na-enye gị ohere ịmepụta abụ, gbakwunye mmetụta na ya, wepụ mkpọtụ, wdg.
Ịda ụda ma ọ bụ egwu ọsọ ọsọ dịkwa.
A sụgharịrị usoro ahụ n'asụsụ Russian ma nwee interface interface enyi.
Ableton Live bụ software ọzọ maka ịke na ịgwakọta egwu. Dị ka FL Studio na Samplitude, ngwa ahụ nwere ike ịmepụta ọtụtụ dị iche iche dị iche iche, dekọọ ụda nke ngwá na ngwá olu dị iche iche, gbakwunye mmetụta. Onye na-agwakọta na-enye gị ohere ịgbakwunye aka ikpeazụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke mejupụtara ya ka o wee dị ezigbo mma.
Iji Ableton Live, ịnwekwara ike ịgbanwe oge nke faịlụ ugbua agwụla.
Site na Ableton Live, dị ka ụlọ ọrụ egwú ndị ọzọ, enweghị enweghị nsụgharị na nsụgharị.
Cool Dezie bụ ihe omume egwu nhazi ọkachamara. Ugbu a renamed Adobe Audition. Na mgbakwunye na igbanwe egwu ndị e debere na mbụ, ị nwere ike idekọ ụda site na igwe okwu.
Ebere egwu - otu n'ime ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ nke usoro ihe omume ahụ.
N'ụzọ dị mwute, a naghị sụgharịa ihe omume ahụ n'asụsụ Russian, ma mbipute a na-agbanyeghị aka bụ oge eji eme ihe.
Ibudata Dezie Dezie
Site n'enyemaka nke mmemme ndị a, ị nwere ike iwepụ faịlụ ọ bụla ọ bụla.